Qareen caan ah oo ka difaacaya Man City ganaaxii UEFA oo maalintii qaadan doona 20kun oo ginni… – Hagaag.com
Posted on 24 Febraayo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Saxaafadda Ingiriiska ayaa sheegtay in Manchester City ay raadineysay adeegga qareenka caanka ah David Pannick si uu u wajaho cunaqabateynta ay ku soo rogeen xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA, kaasoo ku ganaaxay kooxda labo sano inay ka qeyb galin tartamada qaarada.
Wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee Mirror ayaa sheegay in Pannick uu heli doono labaatan kun oo ginni maalintii (qiyaastii 24 kun oo euro) isla markaana uu hogaamin doono kooxda ka difaacaysa naadiga maxkamadda xalinta khilaafaadka ciyaaraha.
Pannick, oo 63 jir ah, ayaa caan ku ahaa guushii uu kaga horjoogsaday dariiqa Brexit laba jeer, kii ugu horreeyay markii uu la wareegay kiis ka horjoogsanaya Ra’iisul wasaarihii hore Theresa May in ay fuliso bixitaanka iyada oo aan oggolaanshaha baarlamaanka ka helin, tan labaadna markii uu daba galay kiis heer maxkamadda sare ee Ingiriiska oo ku eedeysay Rai’isul Wasaare Boris Johnson in uu siiyey talo khaldan boqoradda Elizabeth.
UEFA ayaa ganaax ciyaareed oo labo sano ah iyo ganaax lacageed oo dhan 30 milyan euro dul dhigay kooxda Man City markii ay jabisay qawaaniinta ciyaar wanaaga maaliyadeed.
Manchester City ayaa raadineysa inay baajiso cunaqabateynta UEFA isla markaana ay ka fogaato inay ka maqnaato tartamada Yurub inta lagu guda jiro labada xilli ciyaareed ee soo socota isla markaana ay ku khasaarto in ka badan laba boqol oo milyan oo euro oo abaalmarinno iyo dakhliga baahinta iyo kafaalasdada ee kooxdu heli laheyd.
Kooxda ayaa horay u sheegtay in go’aanka UEFA uu ku saleysan yahay warqado been abuur ah iyo cadeymo la xaday, waxaana agaasimaha kooxda Ferran Soriano uu ka hadlay in go’aanka uu la xiriiro ujeedo siyaasadeed.
Isla qareenkan ayaa horay u matalay Manchester City, wuxuuna ku guuleystay kiis bishii Janaayo 2013 kaasoo ku qasabtay tababarihii hore Joe Royle inuu bixiyo ku dhawaad ​​nus milyan euro oo la siinayo naadiyo magdhow ahaan masaariiftii maxkamada, sababtoo aheyd kiis uu horey macalimka u soo gudbiyey 12 sano ka hor.